Ikuku n'elu igwe - EPONT
Ebe ọ bụ na 2006, Jack Jack bụ ọkachamara na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ (ngwa ahịa hydraulic, Creen Creen).
Akụrụngwa ndị ọzọ na-ebuli
Ọrụ Ọrụ Ahaziri
Ikuku n'elu igwe
’Re nọ n’ebe kwesịrị ekwesị maka Ikuku n'elu igwe.Ka ọ dị ugbu a ị maraworị na, ihe ọ bụla ị na-achọ, ị doro anya na ịchọta ya EPONT.anyị na-ekwe nkwa na ọ bụ ebe a na EPONT.
Mgbe ị na-ekwu maka ya, a na-akpọ ya dị ka mma..
Nzube anyị na-enye ndị kasị mma Ikuku n'elu igwe.n'ihi na anyị ogologo oge ahịa na anyị ga-ifịk ifịk na-akwado ndị ahịa anyị na-enye irè ngwọta na-eri uru.
ụlọ nkwakọba ụlọ ọrụ
Ngwaahịa anyị agafeela OA, GS& Asambodo tuv nke European Union. The àgwà nke anyị na bụ eziokwu na r
Ngwaahịa anyị agafeela OA, GS& Asambodo tuv nke European Union. Ogo ngwaahịa anyị bụ eziokwu na ntụkwasị obi. A na-ere ha nke ọma na ahịa ndị Europe na nke America. Ngwaahịa niile na-eji ọgwụ mgbochi kompeni gburugburu ebe obibi na - 45 Celsius hydraulic, yabụ enwere ike iji ha na mpaghara oyi. Biko tụkwasị obi anyị Epont. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ elont, anyị ga-aga n'ihu na-eme nke ọma
Oke dị elu nke ala Jack 3T ahịa - Zhejiang Yipeng Wity T., LTD
EKPERE OWO OWO OZIOLA N'IME N'IMELỌ NIILE - ZHEJIANGE - ZHEJI NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EKWU EGO. Gụnye ọtụtụ ndị ahịa OM nke ọkachamara na ụgbọ oloko, igwe ụgbọ ala, na-emekọ ihe ọnụ na ụlọ ọrụ nke 500 dị ka otu n'ime ndị na-ebunye ego ha na-akatọ na China.
Ndị na-emepụta ọrụ Hydralic Cydralic
Ngwaahịa a ejirila ule nke ndị otu egwuregwu QC anyị na ndị ọzọ nyere ikike. abidowo ọkachamara na mmepụta nke ọtụtụ afọ. Ngwaahịa a bụ hypollergenic ma yabụ na-eme ka anụ ahụ dị nro, belata ihe ize ndụ nke mmeghachi omume ọjọọ.Eklizia ọkachamara ụlọ ebe obibi, anyị nwere ahịrị ndị na-emepụta ihe, karama na-emepụta ihe dị ka ụbọchị iri abụọ, anyị nwere ike ịpụta ihe dịka 5000pcs, n'ihi na ala jack anyị nwere ike iwepụta 500pcs.
Gịnị Mere Anyị Ji Anyị?
Companylọ ọrụ ahụ bụ ọkacha nrụrụ ahụ na nyocha, mmepe, mmepụta na ahịa dị iche iche hydraulic na ngwaahịa hydraucc.A na-agụta ya na Yipengjack dị ka otu n'ime ndị na-ebubata Porta Poces, anyị na-ewepụta ọtụtụ Porta Power Porta Pocer ngwaahịa na arụmọrụ pụrụ iche na izi ezi. Ngwaahịa anyị na-eme ihe dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ site na ọtụtụ afọ, anyị ebuliwo akụrụngwa na ikike nke ndị njikwa, ndị injinia yana teknụzụ.
KAME BACK 12T
KASLA BACK 12T, ngwaahịa anyị agafeela OA, GS& Asambodo tuv nke European Union. Ogo ngwaahịa anyị bụ eziokwu na ntụkwasị obi. A na-ere ha nke ọma na ahịa ndị Europe na nke America. Ngwaahịa niile na-eji ọgwụ mgbochi kompeni gburugburu ebe obibi na - 45 Celsius hydraulic, yabụ enwere ike iji ha na mpaghara oyi. Biko tụkwasị obi anyị Epont. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ elont, anyị ga-aga n'ihu na-eme nke ọma
Ihe ngosi ihe ngosi Jack.Ihe niile nke zutere ụkpụrụ zuru ụwa ọnụ.
Everont sistem bụ nchịkọta nke engine dị iche iche, ala Jack 3t, Jack Inffry nke bụ ahụ ụlọ ọrụ pụrụ iche maka nyocha, mmepe, mmepụta na ahịa.1. Anyị nwere asambodo: Anyị nwere asambodo tozuru oke2. Teknụzụpụta teknụzụ: nyocha na-aga n'ihu na ihe ọhụrụ3. Afọ ojuju ndị ahịa: Nyepụta ngwaahịa na-eju afọ
Byddic kacha mma na-agba aja bọọlụ
A na-agụta ya na Yipengjack dị ka otu n'ime ndị na-ebubata Porta Poces, anyị na-ewepụta ọtụtụ Porta Power Porta Pocer ngwaahịa na arụmọrụ pụrụ iche na izi ezi. Ngwaahịa anyị na-eme ihe dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ site na ọtụtụ afọ, anyị ebuliwo akụrụngwa na ikike nke ndị njikwa, ndị injinia yana teknụzụ. Akụkụ dị ogologo na akụkụ dị anya nke Jack Power Jack anyị bụ ndị kwesịrị ịdị mma ma nwee ekele maka mpaghara dị iche iche ahịa. A na-eji ngwaahịa anyị niile dabara adaba maka ndị ahịa n'ihi na Jacan ike anyị enyere anyị na-enye anyị iji mejuo ihe dị iche iche nke ndị ahịa chọrọ. Anyị na-ahụ na ọnụ ahịa ọrụ anyị pere mpe.
Everont sistem bụ nchịkọta nke engine dị iche iche, ala Jack 3t, Jack Inffry nke bụ ahụ e ji arụ ọrụ maka nyocha, mmepe na ahịa.
Intro na hydraulic cydraulic na-acha uhie uhie banyere Elont
Mpempe akwụkwọ kdralic na-acha uhie uhie. Enweghị ịgọnahụ na ngwaahịa a nwere mmetụta dị mma na ọnọdụ ma na-enye ezumike, ọkachasị maka nsogbu ihi ụra na ndị isi ọwụwa. Ngwaahịa ahụ nwere oke elu elu. Mbibi nke elu ahụ agaghị enwe ike ịkwado ndị dị ka cracks, notches, oghere ma ọ bụ gbajiri. Kinddị ihe ndina a nwere ike inyere mmadụ aka ịrahụ ụra nke ọma n'abalị, nke na-enyere aka imeziwanye ma melite ikike itinye uche.Eponterato Syloto Sypralic Hydraulic Sypheulic Sypon, ngwaahịa anyị na-ebubata ihe karịrị mba iri atọ dị ka USA, ndị ahịa Spain, Korea, ndị ahịa OME chọrọ ndị ahịa na ụgbọ oloko, Anyị na-emekọ ihe ọnụ, anyị enweelarị ihe karịrị 10 ụlọ ọrụ 500 nke ụwa dị ka otu n'ime ndị na-ewe ha bụ isi nke na-agbaze na China.
Ọkachamara ụlọ ahịa Jack na-emepụta
A na-agụta ya na Yipengjack dị ka otu n'ime ndị na-ebubata Porta Poces, anyị na-ewepụta ọtụtụ Porta Power Porta Pocer ngwaahịa na arụmọrụ pụrụ iche na izi ezi. Ngwaahịa anyị na-eme ihe dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ site na ọtụtụ afọ, anyị ebuliwo akụrụngwa na ikike nke ndị njikwa, ndị injinia yana teknụzụ. Akụkụ dị ogologo na akụkụ dị anya nke Jack Power Jack anyị bụ ndị kwesịrị ịdị mma ma nwee ekele maka mpaghara dị iche iche ahịa. A na-eji ngwaahịa anyị niile dabara adaba maka ndị ahịa n'ihi na Jacan ike anyị enyere anyị na-enye anyị iji mejuo ihe dị iche iche nke ndị ahịa chọrọ.
Naanị hapụ email ma ọ bụ nọmba ekwentị gị na kọntaktị kọntaktị ka anyị nwee ike izitere gị nkwupụta efu maka ụdị atụmatụ anyị!